အသံ | အမေရိကမှာတော့ဘဝအကြောင်းပုံပြင် | USAHello
သင့်အနေဖြင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုအခြားဒုက္ခသည်များနှင့်မျက်နှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်. သူတို့က USA တွင်အသက်ရှင်ခြင်းချိန်ညှိပုံကိုသင်ယူဖို့ Read.
အဆိုပါများအတွက်သိကောင်းစရာများ 2020 တစ်သန်းခေါင်စာရင်းအလုပ်သမားထံမှသန်းခေါင်စာရင်း
ငါအဘို့အသန်းခေါင်စာရင်းအလုပ်သမားခဲ့သည် 2010 သန်းခေါင်စာရင်း. အဆိုပါ 2020 သန်းခေါင်စာရင်းမကြာမီစတင်နေသည်, ငါအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့အအချို့သောအကြံပေးချက်များရှိ. ယူအက်စ်အေတစ်သန်းခေါင်စာရင်းတိုင်းရှိပါတယ် 10 အနှစ်. သန်းခေါင်စာရင်းအမေရိကန်လူဦးရေသည်အဘယ်မှာရှိအစိုးရကိုပြပါလိမ့်မယ်နှင့်အများပြည်သူရန်ပုံငွေများဖြန့်ဝေဖို့ဘယ်လိုကြောင့်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဘယ်လိုသန်းခေါင်စာရင်းအကျင့်ကိုကျင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, ငါနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်. လျှောက်ထားပြီးနောက်လပေါင်းများစွာ, ငါနိုင်ငံသားအဖြစ်အင်တာဗျူးဘို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်. ငါသည်ငါ၏လျှောက်လွှာပေးပို့ပြီးနောက်, လာမယ့်ခြေလှမ်းကိုငါ့ biometric ချိန်းခဲ့. ခန့်အပ်မှာပါ, ငါသည်ငါ့လက်ဗွေရာနှင့်လက်မှတ်ကိုပေး၏, ငါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့သော. ထိုအခါငါဆိုင်းလင့်. အဲဒါက ... ဖြစ်တယ်7ကျွန်မလက်ခံရရှိလအတွင်းမတိုင်မီ ... ဆက်ဖတ်ရန်
Weavetales ဒုက္ခသည်များ၏ပုံပြင်များရှာဖွေနေသည်, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, နှင့်အခြားနေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့သောလူ. ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ပုံပြင်ကိုပြောပြပါ, ထိုသို့လောကကကြားရပြီ. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပြပွဲအဖြစ်, ဝက်ဘ်ဆိုက် WeaveTales အတူတကွအများအပြားပုံပြင်များ၏ချည်တတ်၏, သို့မဟုတ်ပုံပြင်များ, တဦးတည်းအပိုင်းအစသို့. WeaveTales စုဆောင်းလက်ဆောင်အိုးအိမ်မဲ့လူမျိုး၏ပုံပြင်များ. ကျနော်တို့လက်ရှိအဆိုပါ ... ဆက်ဖတ်ရန်
ငါ့နာမကို Ekhlas Ahmed ကသည်နှင့်ငါဒါဖာအတွင်းဖြစ်ပွားနေသောလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကနေလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူဖြစ်ကြောင်းကို, ဆူဒန်. ငါ၏အဇာတိမြေထွက်ခွာစဉ်အမြဲငါဘဝမှာကိုယ်ပြုမိသောအခက်ခဲဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ. ငါအိမ်ပြန်ဟုခေါ်တွင်ရာအရပ် left, ငါ့အလိုရှိသမျှအိပ်မက်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကျင်းပသောအရပ်, ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်ခဲ့တယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်